माथिल्लो तामाकोशीमा सकस, सरकारको भन्दा नागरिकको चासो !
Sun, Dec 8, 2019 at 12:34pm
गौरिकाको नयाँ कीर्तिमान : सागको एउटै संस्करणमा ३ स्वर्ण जित्ने पहिलो नेपाली #आहा खबर# आन्दोलनले उग्ररूप लिएपछि कोहलपुर निषेधित क्षेत्र घोषित #आहा खबर# अबदेखि ठूलालाई पनि कानून लाग्छ : महान्यायाधिवक्ता खरेल #आहा खबर# बेलायती चुनावअघि दुई नेताबीच आरोप प्रत्यारोप, ब्रेक्जिट नै मुख्य मुद्दा #आहा खबर# साग : नेपालका २ खेलाडी जुडो खेलको फाइनलमा #आहा खबर# कोहलपुर तनावग्रस्त : ट्रकको ठक्करबाट बालिकाको मृत्यु, विद्यार्थीले ट्रक जलाइदिए, प्रशासनद्वारा कफ्र्यू आदेश #आहा खबर# नयाँ दिल्लीमा भिषण आगलागीः कम्तीमा ४३ जनाको मृत्यु #आहा खबर# नेपाल भ्रमण वर्ष : ५ हजार व्यक्तिलाई पर्यटकीय तालीम दिइने #आहा खबर# नेपालले बंग्लादेशसँग बराबर मात्र खेले पनि फाइनल पक्का #आहा खबर# नेकपा सचिवालय बैठक सोमबार बस्दै, कस्तो आउला तल्लो कमिटीबाट चुनावी समीक्षा ? #आहा खबर# ..त्यसपछी खुशीको सीमा रहेन #आहा खबर# कीर्तिमानी बालोन डी’ओर पछि मेस्सीको ह्याट्रिक, बार्सिलोनाको शानदार जित #आहा खबर# आज यस्तो छ तरकारीको भाउ - प्याज प्रतिकेजी १ सय ८५, बोडी... #आहा खबर# विरुवा होइन, रुख रोप्ने गण्डकी प्रदेशको तयारी #आहा खबर# कालोपत्रको काम निर्धारित समय अगावै सम्पन्न हुने #आहा खबर#
सोमबार, ६ श्रावन २०७६,	– रमेश लम्साल .
काठमाडौँ, ६ साउन ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाप्रति सरकारको जति चासो छ, त्योभन्दा बढी आम नागरिकको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने करीब छ लाख सञ्चयकर्तामध्ये तीन लाखले आयोजनाको साधारण शेयर खरीद गरेका छन् ।
४५६ मेगावाट :
यस्तै तीन लाख बढी नागरिकले सर्वसाधारणको हैसियतमा आयोजनाको साधारण शेयर खरीद गरी लगानी गरेका छन् । आयोजना कहिले सकिएला र बिजुली बल्ला भन्ने आम चासो पनि उत्तिकै छ । एकै आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सो आयोजना हालसम्मकै ठूलो हो ।
सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा सूचीकृत गरी महत्व दिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा आयोजनाको मात्रै कूल १० करोड ५९ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बिजुली उत्पादन शुरु भए पनि आफूले गरेको लगानीले उचित प्रतिफल देला भन्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा ठूलो छ । सरकार चाहन्छ–आयोजनाको विद्युत् उत्पादन शुरु भएपछि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु पर्दैन । सरकारले हरेक वर्ष करीब १८ अर्ब बराबरको विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर हुने :
आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरकारको अपेक्षा छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएकामा सो आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजना नसकिँदा अपेक्षित लक्ष्य हासिल नभएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सबैको सकारात्मक चासो र अपेक्षा रहे पनि आयोजनाको काम भने त्यत्ति सहज भने छैन । यद्यपि आयोजनाको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत पुगेको छ । बाँकी रहेको दुई प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न भने नेपाल विद्यत् प्राधिकरण र आयोजनाको प्रवद्र्धक माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीलाई गाह्रो परेको छ । साधन, स्रोत उपलब्ध छ । प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ । हरेक महीना आयोजनास्थलमा नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता लगायतको नियमित बैठक राखी समस्याको सहजीकरण गर्नुभएको छ ।
दैनिकरुपमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष घिसिङले चासो राख्नु भए पनि निर्माण व्यवसायीले अझै अपेक्षित कार्यसम्पादन गरेको छैन । यद्यपि ठूलो आयोजनाको काम भने त्यत्ति सहज भने पक्कै छैन ।
ठाडो सुरुङमा पाइप जडान चुनौतीपूर्ण
आयोजनामा नियमित खटिएका माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार तल्लो ठाडो सुरुङमा पहिलो पाइप जडान, वेल्डिङ लगायतका काम गर्न ३६५ घण्टा लागेको थियो । यस्तै चौथो पाइप जडान गर्दा समय घटेर १२८ घण्टामा झरेको छ । समय क्रमशःघट्दै जाने आयोजनाको भनाइ छ ।
कूल ३७२ मिटर लामो तल्लो ठाडो सुरुङमा पाँच मिटर लम्बाइ र २७ टन तौल भएका ७० वटा पाइप जडान गर्न बाँकी छ । माथिल्लो ठाडो सुरुङको लम्बाई ३१० मिटर रहेको छ । आइतबार स्थलगत निरीक्षणमा पुग्नुभएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पाइप जडानका लागि लाग्ने समयलाई अझै घटाउन एन्ड्रिज हाइड्रोलाई निर्देशन दिनुभयो । तल्लो ठाडो सुरुङमा चार वटा पाइप जडान गरिसकेकाले अब ठेकेदार कम्पनीको आत्मविश्वास बढेकाले कामलाई तीव्रता दिने आयोजनाको विश्वास छ ।
२ पेनस्टक पाइप जडान :
स्वदेशी लगानीमा निर्धाणाधीन आयोजनाको दुई वटा ठाडो सुरुङ २७.५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान गरिसकिएको प्रवक्ता डा न्यौपानेले बताउनुभयो । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङमा २० मिटर र माथिल्लो ठाडो सुरुङमा ७.५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान गरिएको छ ।
समयतालिका भित्रै र गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न :
लामो समयको प्रयासपछि अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङमा गत १ असार र माथिल्लोमा ९ असारदेखि पेनस्टक पाइप जडान शुरु गरिएको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पछिल्लोपटक तय गरिएको समयतालिका भित्रै र गुणस्तरीय निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
“जसरी पनि आगामी चैतको दोस्रो साताभित्रमा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नैपर्छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । आयोजनामा कूल छ वटा युनिट छन् । त्यसमा पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
कार्यतालिका अनुसार बाँकी रहने पाँच युनिटबाट आगामी असारभित्रमा अर्थात् चालू आवको अन्त्यसम्म जसरी पनि निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्ने तालिका छ । “निर्माण सम्पन्न हुने समय तालिकामा चासो छ, यसमा गम्भीर बन्नुहोस्, सँगै भएर निर्माण सम्पन्न गरौँ, यसले सबैलाई खुशी बनाउँछ तालिका अनुसार निर्माण सकेनौँ भने सबैलाई समस्या पर्छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो । जनशक्ति बढाएर दैनिक तीन चरणमा काम गर्न पनि उहाँले निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री वर्षमान पुनको आड :
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गत चैत ९ गते हरेक महीना आयोजनास्थलमा पुगी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्री पुनले पछिल्लो पटक तय गरिएको तालिकाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न हरेक महीना आयोजनास्थलमै उच्चस्तरीय बैठक राख्नसमेत आग्ह गर्नुभएको थियो ।
पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ । आयोजना, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच गत २३ पुसमा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्सम्याकाले नै गरिरहेको छ ।
काम सन्तोषजनक भएन
माथिल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको काम सन्तोषजनक नपाइएपछि घिसिङले भारतको कलकत्तास्थित टेक्स्याकोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिसी अग्रवाललाई आयोजनास्थलबाटै फोन सम्पर्क गरी विगतमा जनाइएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
“आयोजनास्थलमा परिचालित व्यवस्थापन ज्यादै कमजोर छ, काममा पर्याप्त जनशक्ति पनि परिचालन भएको छैन । व्यवस्थापन सुधार गरी जनशक्ति थपेर काममा गति दिनुहोस्”, घिसिङको आग्रह छ ।
‘गोरखा भूकम्प’ त्यसपछिका परकम्पन एवं बाढीपहिराले पु-याएको क्षति तथा अवरोध, तराई–मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३-७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्पलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५-७६ को पुस महीनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको थियो । तर लट २ को ठेकदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । आयोजनाको विद्युत् गृह निर्माण सम्पन्न भई तयारी अवस्थामा छ भने प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।